Achit Post, Author at - Page 148 of 160
နောက်ထပ် အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ကြွေလွန့်ခဲ့ရပြန်ပြီ
Jul 14, 2021 Achit Post
ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးလူမုန်း ဆုံးပြန်ပြီ ထူးအိမ်သင်ရဲ့ နာမည်ကြီးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ “ခေါင်းလောင်းလေးတွေမြည်နေပီ”ဆိုတဲ့ သီချင်းကိုရေးသားခဲ့သူ ဒါရိုက်တာအောင်ကိုလတ်ရဲ့ ညီ ဖြစ်သူ တေးရေးသရုပ်ဆောင်ဦးလူမုန်းသည် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့ညနေ ၃ နာရီခွဲတွင် နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်သွားကြောင်း သိရှိရပါသည်.. ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀…
တကယ်လက်တွေ့သိသာလာပြီဖြစ်တဲ့ ကိုဗစ်နဲ့ လောက်သေရွက် အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ်
ကိုဗစ်နဲ့ လောက်သေရွက် ဆရာခင်ဗျား ကိုဗစ်ပိုးက အရက်သောက်ရင်သေတယ်ဆိုတာ မှန်ပါသလား အရက်ပျံ နဲ့လက်ဆေးရင်တောင် ပိုးကသေတယ်ဆိုလို့ပါ ပိုးသေတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခါတရံသောက်ဖို့ဝယ်ထားတာလေး နေ့စဉ်သောက်ပေးရမလားလို့ပါ ဖြေ။ ။ ကိုဗစ်က နှာခေါင်းကနေ လေပြွန် အဆုတ်ထဲဝင်တာလေ အရက်က အာခေါင်ကနေ…
မန္တလေးမြို့သစ် တွင် ၃နေရာ ဆက်တိုက်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး ဆီဘောက်ဆာယာဉ် မီးလောင်
မန်တလေးမွို့သဈ စညျပငျရုံးအတှငျးတှငျ ဗုံးပေါကျကှဲပွီး ဆီဘောကျဆာယာဉျ မီးလောငျ မန်တလေးမွို့၊ ခမျြမွသာစညျမွို့နယျ၊ မွို့သဈ(၁)ရပျကှကျ၊ ၆၂လမျး ၊ ၁၀၆လမျးနှငျ့ ၁၀၇လမျးကွားရှိ စညျပငျရုံးအတှငျးတှငျ ဇူလိုငျ၁၄ရကျ နံနကျ၆နာရီ၂၅မိနဈက ဗုံးပေါကျကှဲပွီး ဆီဘောကျဆာယာဉျ မီးလောငျကွောငျး ဒသေခံမြားက ရနျကုနျခတျေသဈသတငျးဌာနသို့…
Jul 13, 2021 Achit Post
သူမရဲ့နအေိမျကို ဝယျယူမညျဆိုပါက သူမအားဇနီးသညျအဖွဈ အပိုရမယျလို့ကွညောခဲ့တဲ့ အမြိုးသမီး အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံမှာ အမြိုးသမီး တဈဦးက သူမရဲ့နအေိမျ ကို ဝယျ ယူမညျ ဆိုပါက သူမအား ဇနီးသညျအဖွဈ အခမဲ့ အပို ရရှိနိုငျမယျလို့ ကွညော ခဲ့တာ…
ချစ်သူသက်တမ်း (၁၃)နှစ်နီးပါး ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ချစ်သူ ရုတ်တရက် ဆုံးပါးသွားတာကြောင့် လက်ခံပေးဖို့ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ခံစားနေရတဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်နဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဗီဒီယိုဖိုင် ရုပ်သံဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်…. လတ်တလောတွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူကြီးလူငယ်မရွေး ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကိုဝမ်းနည်းစွာဖြင့်…
ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးက ကပျြသိနျး ၁၅၀၀ ဝနျးကငျြကုနျကမြညျ့ ရှလြေ့ားအောကျဆီဂငျြထုတျစကျရုံ တညျဆောကျရနျ စီစဉျနေ လကျရှိဖွဈပှားနသေညျ့ ကိုဗဈ (၁၉) ရောဂါ တတိယလှိုငျးတှငျ အောကျဆီဂငျြ လိုအပျခကျြမြား မြားပွားလာသညျ့အတှကျ ရှလြေ့ားအောကျဆီဂငျြထုတျစကျရုံပုံစံ တညျဆောကျနိုငျရနျ စီစဉျနကွေောငျး ဝဠေုကြျောဖောငျဒေးရှငျးမှ သိရသညျ။…
ထိုငျးနိုငျငံက ကိုဗဈစငျတာတဈခုမှာ ခကျခဲစှာ နထေိုငျရတဲ့ မွနျမာအလုပျသမားတှရေဲ့ အခွအေနကေို ပွသလာတဲ့ ပွညျသူတဈဦး (ရုပျ/သံဖိုငျ)
ထိုငျးနိုငျငံက ကိုဗဈစငျတာတဈခုမှာ ခကျခဲစှာ နထေိုငျရတဲ့ မွနျမာအလုပျသမားတှရေဲ့ အခွအေနကေို ပွသလာတဲ့ ပွညျသူတဈဦး (ရုပျ/သံဖိုငျ) မွနျမာပွညျသူတှအေမြားအပွား စားဝတျနရေေးအတှကျ သှားရောကျအလုပျလုပျကိုငျနကွေတဲ့ ထိုငျးနိုငျငံမှာဆိုရငျ တဈကြော့ပွနျဖွဈပှားလာခဲ့တဲ့ ဗီဇပွောငျးကိုဗဈရောဂါကွောငျ့ လတျတလောမှာ ကူးစကျမှုတှမွေငျ့တကျနခေဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးလောကျကဆိုရငျလညျး ရောဂါကူးစကျတဲ့ လူနာတှကေိုထားစရာနရောမရှိတာကွောငျ့…
“ဖုတ်” ဝင်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…!
“ဖုတ်” ဝင်တယ်ဆိုပြီး သေတဲ့ အမေအိုတစ်ဦးရဲ့ အလောင်းကိုရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သောအခါ…! အမေဆာလို့ပါ သားရယ်တဲ့လား ……. တကယ်ဖုတ်မဟုတ်ဘဲ မိဘအရင်းကို ဖုတ်ထုတ်တယ်ဆိုပြီး ကိုယ်တိုင်ပဲ လုပ်သည်ဖြစ်စေသူတစ်ပါးကိုလုပ်ခွင့် ပေးသည်ဖြစ်စေ၊ အဲဒီသားသမီး ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်သောပဉ္စာနန္တရိယကံကြီးထိုက်ပါတယ်။ ဖုတ်ဝင်တယ်ဆိုပြီး အသတ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖွားတစ်ဦး…
ကိုဗစ်ကြောင့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ကြွေလွင့်သွားရပြန်ပီ
ကိုဗစ်ကြောင့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ကြွေလွင့်သွားရပြန်ပီ မြန်မာပရိသတ်တွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သလို မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ အတော်များများမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ ဦးရွှေလ၀င်းဟာ ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ (၁၃)ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး အောက်‌ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှုတွေကြောင့် သင်္ကန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးမှာ ယနေ့မနက် ၁၀နာရီ ၁၀မိနစ်ခန့်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်းကို ဦးဝင်းမြိုင်က သူ့ရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ ရေးသားမျှဝေလာခဲ့ပါတယ်….။…
စစ်.ကောင်.စီတ.ပ်က ရှာဖွေဝရမ်းမပါဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက် စစ်.ကောင်.စီ.တပ်က နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏နေအိမ်ကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေစဉ် ဥပဒေအရအဓိကအရေးပါသည့် ရှာဖွေဝရမ်းမပါလာခဲ့ကြောင်းယနေ့တရားခွင်အတွင်းစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများကတဆင့်ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဇဗ္ဗူသီရိမြို့နယ် အထူးသီးသန့်တရားရုံးယနေ့ ရုံးချိန်းတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားတရားစွဲဆိုထားသော ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေပုဒ်မ၈အမှုအတွက်စစ်ဆေးရာနေအိမ်သို့ဝင်ရောက်ရှာဖွေစဉ်က ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူဗိုလ်မှူးဝင်းထွဋ်ဦးအားရှေ့နေများကအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ် ရှာဖွေဝရမ်းမပါခဲ့ကြောင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ဟု အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ရှေ့နေအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သောတရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးခင်မောင်ဇော်အပြောအရ သိရသည်။ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ပုဒ်မ၈အမှုအတွက်…